chii USB3.1 HUB? | Huachuang Electronic
Tsvaga zvese zvaunoda kuziva nezve USB-C hubs uye USB 3.1 hubs pano. Ndeupi musiyano? Pane misiyano here? USB Type-C imhando yekubatanidza yakaunzwa muna 2015. Iyo Type-A yekubatanidza, iyo yakajairika kwenguva yakareba, ichagadziriswa Type-C. Aya mapuranga ari mashoma uye anogona kushandiswa kubva kumativi maviri - ayo angangoita mukana mukuru. Usambofa wakatarisa kuti plug inofanira kuverengerwa sei kuchiteshi - ingoisa mukati!
Pfupiso yezvakanakira USB 3.1
kaviri kukurumidza se USB 3.0
20x inokurumidza kupfuura USB 2.0
kudzika kunoenderana ne USB 3.0 & USB 2.0 zvishandiso
kutapudza kwakawanda simba (900 mA) - zvinyorwa zvemitemo zvinogona kubhadharwa
Chii chekuita kana iyo Mac kana iyo itsva Laptop ine Type C USB yekubatanidza, asi ese magumo ekushandisa achiri USB 2.0 kana 3.0? Kana kana paine mashoma plug slots?
Mhinduro yacho inonzi USB-C Hub. USB hubs ndeye imwe nzira yakanaka yekushandisa iyo USB 3.1 doko paMac ine yekare USB marudzi. Izvi zvinotevera zvinoshanda pano: ipfupi iyo hub tambo uye mashoma plug kubatanidza kune, zvirinani kushanda. Vanamazvikokota saka vanokurudzira kuti unganidza hubs dzinoverengeka mumutsara pane kushandisa hub ine akawanda masango. A USB Type C 3.1 hub inogonesa kubatana kwemano akati wandei ne USB 3.0 yekubatana kana kuti mukuru kune USB Type-C kubatana kweMac uye komputa kana tsamba yekunyorera. Midziyo mikuru inogona kushanda pane hub yakadaro, asi chete kumhanya uye kumhanyisa kunoitirwa ivo.
Ko chinongedzo che USB-C chinokodzera mukombuta yangu yekare here?
Kwete - USB-A kana USB-B (Micro-USB) kupinza hakuenderani nekuti chimiro zvacho zvakasiyana zvachose.
Iyo yekare USB-Iyo inobatanidza inokodzera mune nyowani USB-C mudziyo?
Kwete - iyo USB-C yekupinda yakanyanya kuderera.
Ko Micro-USB uye USB-C inokwana here?
Kwete - mafomati ekubatanidza anosiyana.
Chinyakare USB 2.0 chishandiso hachifanirwe kukurumidza nekuchishandisa icho chazvino 3.1 hub. Nekuti iyo brake ndiyo interface isina iyo inodikanwa yekudyidzana kusvika SuperSpeed ​​+ pano. Sezvineiwo neshanduko kubva ku USB 2.0 kuenda ku USB 3.0, USB 3.0 kuenda ku USB 3.1 iri kumashure inoenderana. Zvinotora chinguva isati yagadziriswa USB-C inoshandiswa paMacBooks uye vashandisi vanogona kuita pasina adapta. Izvo zvese zvinonzwisisika kuti zvinhu zvakatengwa munguva yakapfuura zvinofanirwa kuramba zvichishandiswa.
Yazvino USB C hubs
Kubva ku USB 1.0 kusvika ku USB 3.1 - iko kusimudzira kusingaperi
Iyo Universal seri Bhazi (USB) yakazvisimbisa seyenzvimbo inoenderana uye hwayo hunodzokera hwakareba munzira yekare yekombutaji Muna1996, iyo yekutanga vhezheni yacho 1.0 yakaita kuti kuve nekubatanidza zvishandiso zvakati wandei, senge maprinta, hard disk kana ma scanners, kuburikidza neunifomu yekufananidza pasina kuisa iyo inodhura yeSCSI plug-in kadhi panguva kana kana kutenga inotenderana mhedzisiro yekupedzisira. Iyo yekutanga vhezheni yaigonesa mwero wekuendesa unosvika 1.5 kana 12 MB / wechipiri. Shanduro 2.0 ine zita rekuti Hi-Speed ​​yakaunza kuendesa data kugona kwe60 MB / yechipiri muna 2000. Iyo USB standard 3.0, makore masere gare gare, inonzi SuperSpeed ​​kuwedzera kwekufambisa nekukurumidza kusvika ku500 MB / yechipiri.
Chishandiso chitsva che USB chinoshanda neyekare here?
Icho chinhu chakanaka pamberi: USB 2.0 zvishandiso zvinogona zvakare kusevenzesa pane USB 3.0 masokisi. Izvi zvinoreva kuti, semuenzaniso, danda rekuyeuka rine USB 2.0 chiteshi rinogona zvakare kushanda pa USB 3.0 chinongedzo - zvisinei, pane matambudziko neiyo USB USB chinongedzo 3.0, sezvo iri yakafara uye ine notch mundiro yekutungamira. . Sezvakaita ne USB 2.0, USB 3.0 yakavakirwa pakumhanya kweiyo isina kusimba mudziyo. Nekudaro, USB 2.0 zvigadziko hazvigamuchiiri USB 3.0 plugs - izvi zvinokodzera kune vanobatika.
Muchidimbu, izvi zvinoreva:
USB 3.0 tambo haisi kumashure inowirirana maererano nemagumo ekupedzisira
Tambo dze USB 3.0 dzinogona kubatanidza mudziyo we USB 3.0 kune anosvika USB 2.0
Matambo e USB 3.0 haakwanise kubatanidza mudziyo we USB 2.0 kune USB 2.0 yekugamuchira
Matambo e USB 3.0 haakwanise kubatanidza mudziyo we USB 2.0 kune USB 3.0 yekugamuchira
Tambo dze USB 2.0 dzinogona kubatanidza mudziyo we USB 2.0 kune USB 3.0 yekubata
Matambo e USB 2.0 haakwanise kubatanidza mudziyo we USB 3.0 kune USB 3.0 yekugamuchira
Matambo e USB 2.0 haakwanise kubatanidza mudziyo we USB 3.0 kune USB 2.0 yekugamuchira
USB 3.1 yakajairika uye itsva USB Type-C chinja
Kuenderana, tambo uye chinongedzo chejekiti - Ikozvino USB standard 3.1 inofanirwa kupa mufananidzo wakajeka. Neiyo shanduko kubva ku USB 3.0 kuenda ku USB 3.1, tambo yekubatanidza nyowani inotangwa muiyo nyowani USB mutsetse: Iyo yekudzvanya mhando C inotsiva yekare standard rudzi A uye inogona zvakare kuiswa pamativi ese. Iyo inopawo yakakwira yekumhanya yekumhanyisa. Nekubatsira kweye USB hub, USB 2.0 zvishandiso zvinoshanda nekagetsi mhando A inogona kushandiswazve pane USB 3.1 kubatanidza ne-chinongedzo mhando C uye zvinopesana. Nekudaro, pane matambudziko negetsi yemagetsi painobatanidza USB 3.0 uye 3.1 zvishandiso ku USB 2.0 madoko, sezvo USB 3.0 yakawedzera iripo kubva ku500 mA kusvika 900 mA. Iyo yechirume USB-C yekubatanidza zvakare yakanyanya kuderera pane yayo Type A yakatangira. Kugadzikana kwayo kunopfuura gumi.
Apple inotsiva iyo Thunderbolt interface ne USB Type-C
Iyo Thunderbolt chiteshi yakabatanidzwa pamwe neApple neIntel, iyo yainyanya kushandiswa muApple Macs, yakatsiviwa muna 2015 ne Type C slot ne USB 3.1. Neiyi interface inoitawo mukana wekubatanidza skrini. Screen resolution kune anosvika ku5k haina dambudziko kune chinobatanidza. Izvo hazvisati zvanyatsojeka kana chinongedzo mhando C ine USB standard 3.1 ichave yakajairika yekuchaja tambo muEurope. MunaKurume muna 2014, Paramende yeEuropean yakapa bumbiro raizopa chingwaru yekuchaja tambo yemafoni nhare kubva muna 2017. Kusvika panguva iyoyo, chibvumirano cheyunifomu yekuchaja tambo nhanho ndeyekuzvidira - pano vese vanogadzira, kunze kweApple, ndiyo chete kambani ine Yemheni tambo isingateveri chero chiyero uye inobika sosi yayo yega. Nayo pachayo, USB Type C yekubatanidza ne USB 3.1 ine mukana wakanaka wekuzvisimbisa seyowo chiyero chitsva nekuti iyo idiki yekubatanidza inobvumira kushomeka kubatana pamidziyo uye yekumhanya yekumhanyisa yakagadziriswa zvakanyanya. Uye zvakare, iyo Type C yekubatanidza inoderedza USB tangle tangle, sezvo inogona kutsiva ese USB USB mhando dzemunguva yakapfuura kwete nekuda kwekubatana kwayo kumhanya, asiwo neyazvino 900 mAh.